MALKOLM X [Kutaa lammafaa] YEROO MALKOLM EKS MAATII MISEENSA MUSILIMAA TA’UUN DABARSE MAAL FAKKAATA TUREE? – Beekan Guluma Erena
MALKOLM X [Kutaa lammafaa] YEROO MALKOLM EKS MAATII MISEENSA MUSILIMAA TA’UUN DABARSE MAAL FAKKAATA TUREE?	Beekan Erena
Seenaa June 18, 2016OROMO
15SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
YEROO MALKOLM EKS MAATII MISEENSA MUSILIMAA TA’UUN DABARSE MAAL FAKKAATA TUREE?
“Barsiisa obbo muhaammadditti dabalataan hidhamtoota akka koo fi warra achitti dhufanii na gaafataniif…akkasumas kitaaba waanan dubbisuuf ji’oottan utuun mana hidhaa jiraachu koolle hin yaadin darbee. Sababnii isaas amma ammatti biliisuumma dhugaa jireenya kiyyatti argee hin beekuu.”
Malkolm Eks Yeroo Malkolm little mana hidhaa seenee nama akka isaa hidhaatti jiru kan John Berry waliin wal argee. John Berry’n nama ofiin of barsiisuu beeku waan ta’eef Malkolm little akkas jechuun ibsateenii turee: “ Namaan jireenya kiyyatti arge keessa kan kabaja onne guutuu kennefidha” jechuun turee. Dhiibba John Beeriin fedhii kitaaba dubbisuuf inni qabuu baay’ee sadarkaa olaanaa irra gahee.
Yeroo kanatti turee kan obbolaan isaa waa’ee sochii amantaa maatii musilimaa jedhamuu kan of danda’uu gurrachotaa lallabu akkasumas rirritaa Warra adii Ameerikaafi Aworopaa irra biliisa ba’uuf jecha gara Afrikaatti deebi’uu qabaachuu diyasporaa Afrikaanota Ameerikaa irratti akka dhabnii amantaa kun sochii jalqabee jiru kan himaniif. Gara jalqabaa Maatii Musilimaa kanatti dabbalamuuf fedhii yartuu agarsiisuyuu erga bara 1948 obboleessi isaa Rejinald “Malkolm,amman booda yoo foon booyyee nyaachuufi Tamboo aarsuu dhiistee akkaata ati itti mana hidhaa baatuun siif hima” jechuun barreseefi booda Tamboo aarsuu dhisee nyaata foon Booyyee irra dalagame nyaachuu didee. Erga Rejinald mana hidhaatti isa gaafachuun waa’ee barsiisa garee kana ibseefi; ibsa isaattis waa’ee Jinnii(Seexana) ta’uu warra adii ibseefi booda turee kan Malkolm hariroo inni warra adii waliin qabu akka amanamuumma kan hin qabne, haqa maleessa, dhoqnumma isaaniifi jibba waarri adii isaaf qabaniin kan guutame ta’uu damadamee. Malkolm waldhabdee inni namoota kaan waliin amantaa ilaalchisuun godhuu irraan kan ka’ee mana hidhaa keessatti maqaa masoo “sexana” jedhu kennameef waan tureef barsiisa hordoftoota maatii musilimaa fudhaachaa turee.
Bara 1948 Geggesaa dhaaba Maatii Musilimaa yeroo saniiif kan turan Elijaah Muhaamediif Xalayaa barresee. Muhammadis akka inni waa’ee jireenya isaa darbee qalbii jijjiratuu, garaa qulqullun kadhata isaa gara ALLAH tti dhiheefatuufi amala isaa badaa sana irra akka deebu’uu waadaa akka seenuu qabu deebiseefi. Yeroo gabaaba keessattis Miseensa maatii musilimaa ta’uun Muhamad waliin hariiroo gaarii qabaachuu jalqabee.
Bara 1950 xalayaa inni piresidantii Tirumaniif akka waraana koriyaa hindeggarre eeruun akka Kommunistii ta’e ifaatti yeroo barresuuf FBI’n faayila irratti bane. Bara sana ture kan inni maqaa isaa “Malkolm X” jechuun mallateesuu eegale. Barrefama harka isaan barrefame irratti akka musilimaatti “X” jechuun maqaa maatii Afrikaa isa dhugaa inni tasumaayuu hin beekne akka bakka bu’u eeree ture. Akkas jechuun barresee turee “anaaf X kan bakka bu’u maqaa an ittin waamamaa ture Little jedhu isa gabromfataan koo warri adii ittin ana waaman kun sexanoota ija magarisaa Little jedhamaniin enyumaa achii as dhufa maatii koo doksuun kan irratti fe’amee waan ta’eefan jijjiradhee” jechuun turee.
YEROO ITTI MINISTEERA TA’UUN DALAGEE!
Erga ilaalchi godhamuuniif mana hidhaati gadi lakkifameen booda Elijah Muhamed waliin Chikaagootti wal arganii. Caamsaa bara 1953, mana amantaa Maatii musilimaa isa jalqaba kan ta’e kan Detroititti argamutti itti aanaa amantaa ministera ta’uun filatamee. Baruma sana gara boodaa mana amantaa lakkobsa 11ffa bostonitti lakkobsa 12ffa ammo piladelfiyaatti babbal’isee. Ji’a torbaan booda mana amantaa torbaafa kan Harlemitti argamu akka geggesuuf filatamee deemuun miseensa amanta kana akka baay’atan godhee. Bara 1953 hordofii kommunistidha jechuun isarra godhanii turan fudhatama inni maatii musilimaa kessatti argachaa dhufe irran kan ka’ee gamasiin cimsanii hordofuu itti fufan.
Bara 1953 ttille miseensa matii musilimaa kanatti dabalamaan milkaa’inaan horachaa dhufe. Mannen amantaas Ispiringfild, Masachusets (lakk. 13) ; Hart ford, konnektikut (lakk.14) akkasumas Atilaanta, Jorjiya (lakk. 15) akka hundaa’uu godheeraa. Afirikanotni Amerikaa heddunis ji’aa ji’aan gara maatii musilimaa kanaatti makamuu eegalanii.
Dandetti dubbachuu isaatti dabalataan Malkolm X dhaabbata qaama nama hawwatu qaba turee. Dherinni isaa metira 1.91 yeroo ta’u ulfaatinni isaa ammo kg 82 turee. Qaama nama hawwatu akka qabu barresitootni hedduun ibsanii barresaniifi jiru!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa15SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← SEENAA MALKOLM X – KUTAA SADAFFA-Temesgen Atnafu Mulatu’tiin-Seenaa Irraa barachuu qabnudha!
DHUKKUBA SAREE MARAATUU (RABIES)!!-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa →